Red Hat Innovation Awards: vakundi veiyi XIII edition | Linux Vakapindwa muropa
Tech hofori Red Hat inopa mubairo neiyi yayo Red Hat Innovation Mipiro. Kambani yatakadzidza kubva nguva pfupi yadarika kuti ruramisiro yakavhura musuwo wekutsvaga kwayo neiyo hofori IBM, ikozvino, kubvira Red Hat Summit 2019, yazivisa vakundi vemubairo unozivikanwa. Iyi mibairo inoziva iyo yekugadzira uye yekuvandudza tekinoroji kubudirira kweRed Hat vatengi, izvo zvakare zvinofambisa kugadzirisa matambudziko uye kushandisa shanduko kushandiswa kweRed Hat nharaunda.
Sevakakunda iyi XIII edition, inopembererwa naRed Hat, isu tine mazita akafanana BP, Deutsche Bank, Emirates NBD, HCA Healthcare uye Kohl's. Ivo vakasarudzwa kuburikidza nesarudzo, asi izvozvi vanozoita vhoti nyowani pamhepo iyo nharaunda yese ichatarisa kuti ndeupi wavo achatora mumwe mubairo, Red Hat Innovator yeGore. Kuvhota kwave kuvhurwa uye kuchapera nhasi na5: 59 am CET.
Para ndiani asingazive mafainari izvozvi:
BP: ikambani yesimba inoshanda munyika dzinopfuura makumi manomwe. Isu tese tinoziva BP yemafuta, asi BP inopfuura izvo uye yatora nzira inozivikanwa sedambudziko rechipiri kusangana nezvesimba gurusa pasimba rekuda pamwe nemhepo shoma. Uye kune izvo, tekinoroji uye dijitari mhinduro dzinodiwa dzavakawana mubairo uyu.
German Bank: Iyo inozivikanwa zvakare inonyatso kuzivikanwa, bhanga reGerman rakatanga muna 2015 zano kuitira kuti mabhanga aro ese agone kupa zvese sevhisi. Kune izvi ivo vaida mari kuti vawane hunyanzvi hwakawanda, kusimbisa uye kurerutsa mamiriro ekushandisa kwavo, kunatsiridza kugadzirwa kweserura uye kudzikisa mutengo. Zvese izvi zvinotsigirwa neRed Hat tekinoroji yavanoshandisa sehwaro.
Emirates NBD: pamwe isinganyanyo kuzivikanwa kupfuura yapfuura, asi imwe kambani iyo muna 2017 yakatanga shanduko huru yehunyanzvi iyo inoshandura mukudyara kwemamirioni mazana maviri nemakumi manomwe emadhora kuitira kuti vatengi vayo vakwanise kuwana bhangi redhijitari nehunyanzvi hwakawanda uye nekukurumidza kupfuura vavakwikwidzi vako.
HCA Hutano hwehutano- Kuuya kubva kuindasitiri yehutano, kushandisa tekinoroji nehungwaru hwekunyepedzera kuenderera mberi nekutungamira sevapi vezvehutano nekukurumidza. Nekudaro ivo vanokwanisa kurwisa sepsis, hutachiona hunogona kupera nekukuvara kunhengo kana kufa, uye nekuda kwehunyanzvi hwavanowana kuwana mhedzisiro maawa gumi nemasere pamberi peyedzo dzechinyakare, uye izvo zvakawanda muchikamu umo maminetsi mashoma anogona zvinoreva mutsauko pakati pehupenyu nerufu.
Kohl's: ndeomnichannel mutengesi ane zvinopfuura 1100 zvitoro munyika makumi mana nenomwe. Iri kushandura kuita kambani-inotungamira gore uye sechikamu cheiyi shanduko inotsvaga kuendesa mashandiro emazuva ano uye kutsigira shanduko yayo. Wakavaka mhinduro iri nyore pamwe neepamberi, inoshanduka-shanduka, inowedzerwa, uye inokwanisa kupa wega-sevhisi.
Chii chaunofarira kwaari Red Hat Kugadziridza kweGore? Pasina kupokana ndinayo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Red Hat Innovation Awards: vakundi veiyi XIII edition